Akụkọ - Ihe dị iche na dumbbell squat na barbell squat
Ihe dị iche n’etiti dumbbell squat na barbell squat
Site n'ọganihu nke ọha mmadụ, echiche ọmarịcha ndị mmadụ na-agbanwe mgbe niile. Ruo ogologo oge, ọmarịcha ụkpụrụ nke ịdị gịrịgịrị nke ịma mma dị ka idei mmiri rikpuru. Nke nta nke nta, ndị mmadụ anaghịzi achụ ọnwụ oke ọnwụ, mana na-etinyekwu uche na ahụ ike. nsogbu. N'oge a, ahụike na-aghọwanye ewu ewu. Ndị mmadụ nwere ike iji ahụ ike mezuo nzube nke ime ka ahụ ha dị ike ma mezie ọdịdị ahụ zuru oke. Na usoro nke mgbatị ahụ, squat bụ usoro mmegharị anya. Yabụ, kedu ihe dị iche na dumbbell squat na barbell squat?
Ngwá ọrụ ọzụzụ dị iche iche
Ọ bụ ezie na ha niile na-eme squats, akụrụngwa eji dị iche, mmetụta ga-adị iche. Dumbbell squats na barbell squats na-eji ngwa ọzụzụ dị iche iche. Ọdịiche dị n'etiti dumbbells na barbells ka dị oke buru ibu, na usoro nke ha abụọ dịkwa iche. Karịsịa n'ihe gbasara ịdị arọ, ịdị arọ nke dumbbells dị obere. N'ime mgbatị ahụ n'ozuzu, dumbbell kachasị njọ bụ naanị ihe dị ka kilogram 60. Thedị dị arọ nke barbells buru oke ibu, gụnyere 250 n'arọ, 600 n'arọ, na 1000 n'arọ.
Dị iche iche ọzụzụ ibu
Dumbbell squats bụ ọzụzụ dị arọ site n'enyemaka nke dumbbells, nke nwere ike ime ka squats dịkwuo irè. E jiri ya tụnyere barbell squats, dumbbell squats na-adị mfe karịa. Karịsịa maka ndị na-azụ ọzụzụ nwere ike ịme squats, ọ bụrụ na ịchọrọ ịga n'ihu, ị nwere ike ịmalite site na dumbbell squats. Ọbụna ma ọ bụrụ na ịnweghị ike iburu ibu nke dumbbells, ị gaghị echegbu onwe gị gbasara nsogbu nchekwa, hapụ ya. Ngwongwo barbell dị ize ndụ ma chọọ enyemaka nke akụrụngwa pụrụ iche ma ọ bụ ndị nlekọta.
Ndị dị iche iche metụtara
Ngwurugwu barbell dị arọ karịa omimi dumbbell, a na-ahụkarị mmetụta okike. Ọ bụrụ na onye na-azụ ọzụzụ chọrọ ka akara nke ya dịkwuo mma ma dịkwa mma, ma ghara ịchụso ahụ ike, mgbe ahụ, dumbbell squats nwere ike izute mkpa ahụ. Ọ bụrụ na onye na-azụ ọzụzụ chọrọ inweta ụfọdụ ọzụzụ ọzụzụ ahụ ike, ọ dị mkpa iji barbell mee squats. Ya mere, dumbbell squats na barbell squats kwesịrị ekwesị maka ndị dị iche iche. Kedu nke ịhọrọ dabere na mkpa gị.